January 5, 2020 - ThutaStar
January 5, 2020 Thuta Star 0
အိမ်မက်မက်တတ်ရင်…သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) ထိ…
အိမ်မက်မက်တတ်ရင်…သိမ်းထားပါ….(က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ တစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူ ၏ အရွယ်အစားနှင့် အရေးပါသောအမှတ်အသားများ
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံပါ တဈထောငျတနျငှစေက်ကူ ၏ အရှယျအစားနှငျ့ အရေးပါသောအမှတျအသားမြား ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလ ၄ ရကျနမှေ့ာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံပါတဲ့ ၁၀၀၀ တနျငှစေက်ကူတှထှေကျရှိတယျဆိုတာ ပရိသတျကွီးတို့လညျး သိရှိကွမှာပါ…ဒါပမေဲ့ အဲဒီနကေ့ ရုံးပိတျရကျ ဘဏျပိတျရကျဖွဈတာကွောငျ့ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ ၇ ရကျနမှေ့ာမှ ပွညျသူတှလေကျထဲ ရောကျနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ… ထှကျရှိလာတဲ့ […]
ကိုယ့်မွေးသက္ကရာဇ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ နက္ခတ်ကို သိနိုင်ပါတယ်။ “နက္ခတ် အဟောများ” နတ်နက္ခတ်၊ လူနက္ခတ် ကောင်းတယ်။ဘီလူးနက္ခတ် မကောင်းပါ။အိမ်ထောင်ပြုလျင်… နတ်နက္ခတ်နှင့် လူနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်။ လူနက္ခတ် နှင့် လူနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်။ ဘီးလူနက္ခတ်နှင့်ဘီးလူနက္ခတ်ပြုလိုရတယ်။ မှတ်ချက်။လူနက္ခတ်နှင့်ဘီးလူနက္ခတ်အိမ်ထောင်မပြုရပါ။ဘီးလူနက္ခတ်နှင့်လူနက္ခတ် အိမ်ထောင်မပြုရပါ။ပြုလျှင်အဆင်မပြေပါ။ “နတ်နက္ခတ်” ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့သည် လူဖြောင့်စိတ်တိုများဖြစ်ကြသည် မိမိသာမှန်ပါစေ ငြိမ်ခံလေ့မရှိဘဲ မှန်ရာကို […]
မကွယ်လွန်ခင် တစ်သက်လုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရလာတဲ့ငွေတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီး
“မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ” တဲ့…ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ အလှူကတော့ တကယ့်ကို ချီးကျူး သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…. မိမိကိုယ်တိုင်က ဆင်းရဲသူဖြစ်ပြီး နေစရာအိမ်တောင်မရှိတဲ့ သန့်ရှင်းရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့် သူလှူခဲ့တဲ့ ငွေတွေကတော့ တကယ့်ကို များပြားလှတာပါ… ဒီလို ချီးကျူးလေးစားရမဲ့ အိမ်ရာမဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ အလှူကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက […]
”ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဂါထာတော်”…
အန္တာရာယ် ကင်း ဂါထာ တော် ယနေ့ခေတ်တွင် အတော် ကြောက်စရာကောင်းလာ ၏ခရီးသွားချင် စိတ်တောင် တချို့နေရာတွေ မသွား မလာရဲ အောင် ဖြစ်မိ၏ သတင်းတွေ ကလည် အန်ိဋ္ဌာ ရုံတွေကသာ များလာသည် ဟိုနေရာဖြင့် ကားတိုက်တာဆိုင်ကယ် မှောက် ဟိုနေရာဖြင့် ဓာက်လိုက် စသဖြင့်ပေါ့လေ […]
၂၀၂၀ ခုနှ စ် အတွင်း သောကြာ သားသမီးတွေ အ တွက် တ စ်နှစ် တာဟော စာ တမ်း…
ဒီနှ စ်(၂၀၂၀)ဟာ သောကြာသားသမီးတွေအတွက်မိမိခံယူတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးကံအနေအထား ကွာသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သောကြာချင်းတူရင်တောင်မှ ကံချင်းတူဖို့ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ လူရဲ့နေထိုင်မှုအရကံအနိမ့် အမြင့်ကလဲ ကွာသွားနိုင်ခြေရှိလို့ပါပဲ။ ဒီနှစ်မှာတော့ သောကြာသားသမီးတွေက ကိုယ့်အလုပ်တွေကို ခေတ်နဲ့အညီ update လုပ် ပါေ တာ့။ မိရိုးဖလာကနေ ပိုမိုတိုးတတ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့လုပ်ငန်းတွေကျဆုံးနိုင်တဲ့ သဘောေ တွ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မိမိရဲအသက်မွေးမှုပညာတွေကိုစီးပွားရေးအဖြစ်ဖန်တီးဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ (၂၀၂၀)မှာ အလုပ်အပြောင်းအလဲတွေ၊ နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲတွေ၊ […]
(၁၃၈၁-၁၃၈၂)ခုနှစ် ၊ 2020-ခုနှစ်အတွက် လအလိုက် ထီထိုးရန်ကောင်းသာ မင်္ဂလာရက်များ
အထူးဂရုစိုက်ပေးကြဖို့ရာ တကယ်ပင်လိုအပ်ပါကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့နဲ့ ရရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ
ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့နဲ့ ၇ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ ကချင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်းဒေသအချို့တို့မှာ နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်မှ မိုးအသင့်အတင့် ရွာနိုင်ပြီး ကျန်ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ၆ရက်နေ့ ညပိုင်း ၇ နာရီ အချိန်ခန့်မှစ၍ မိုးမရှိပါကြောင်း လုပ်ဆောင်စရာရှိသည်များကို စတင်အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၈ […]
( ၅ ) ရက်နေ့အတွက် မိုးသည်းထန်ခြင်း ၊ မိုးထစ်ချုန်းရွာခြင်း ၊ မိုးသီးကြွေကျခြင်း၊ လျှပ်စီးမိုးကြိုးအန္တရာယ်များ ကျရောက်နိုင်သော နေရာများ
ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်နေ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာသွန်းနိုင်ကာ ချင်းပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်​မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးများရရှိနိုင်ပြီး … မိုးသည်းထန်ခြင်း မိုးထစ်ချုန်းရွာခြင်း လျှပ်စီးမိုးးကြိုးအန္တရာယ်များ ကျရောက်နိုင်ခြင်း မိုးသီးကြွေကျခြင်း နှင့် တခါတရံလေပြင်း ဆောင့်တိုက်ခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။လေပြင်းဆောင့်တိုက်ချိန် တစ်နာရီ ၃၀ […]